🥇 ▷ Qiimaha iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus adduunka oo dhan ✅
Qiimaha iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus adduunka oo dhan
Ha ilaawin qiimaha iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus ee wadamada oo dhan
Sidaan horeyba u ognahay, Sebtember 19-keedii, Apple iyo Apple 6 Plus ee cusub iyo kuwii muddada dheer sugayay, labada calanka cusub ee shirkadda Californian. Bilaabashadeeda, sida had iyo jeer, waa la isdhaafinayaa inkasta oo waqtigan la joogo ma aha inaan sugno illaa iyo waqtigaas laga bilaabo Sebtember 26, sidoo kale waxaa laga heli karaa dalal kale oo badanoo ay ku jirto Spain. Su’aasha ayaa ah in la ogaado wadankee ay ku habboonaan lahayd in lagu iibsado iPhone 6 ama iPhone 6 Plus qiimahiisa? Kadib waxaan kugu dhaafaynaa adiga Shaxda qiimaha loogu talagalay iPhone cusub ee adduunka oo dhan.
Shaxda qiimaha ee iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus adduunka oo dhan, ee Euros
Wadamada yeelan doona mudnaanta ay ku raaxeystaan ​​imaatinka cusub ee iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus kahor bisha Sebtember 19-ka ayaa noqon doona Mareykanka, Canada, Jarmalka, France, Boqortooyada Ingiriiska, Australia, Hong Kong iyo Singapore. Si kastaba ha noqotee, iyo hal toddobaad oo sugitaan ah, laga bilaabo Sebtember 26ka soo socda, labada moodalba waxaa laga heli karaa inta badan Yurub iyo waddamada kale ee adduunka, halkaasoo Isbaanishku sidoo kale galo, si ay u gaadho wadar ahaan 22 dal.
Hadda, haddii aad jeceshahay inaad ogaato inta ay ku kacayaan iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus ee dalalka kale, laakiin in lagu beddelo Euros, markaa ha seegin jadwalka aan hoos uga tageyno.
Qiimaha IPhone 6 ee dhamaan wadamada
wadanka iPhone 6 16 GB iPhone 6 64 GB iPhone 6 128 GB
ISTICMAALKA € 503 € 580 € 657
Kanada € 523 € 599 € 677
Dubai € 547 € 632 € 716
Hong Kong € 558 € 683 € 718
Taiwan € 579 € 666 € 759
Singapore € 604 € 702 € 789
Australia € 606 € 696 € 787
Switzerland € 628 € 727 € 826
New Zealand € 629 € 724 € 818
Ruushka € 651 € 753 € 854
UK € 678 € 778 € 879
Sweden € 693 € 802 € 910
Jarmalka € 699 € 799 € 899
Holland € 699 € 799 € 899
Isbaanish € 699 € 799 € 899
Boortaqiiska € 699 € 799 € 899
Danmark € 699 € 806 € 913
Norwey € 702 € 811 € 950
Faransiiska € 709 € 819 € 919
Talyaaniga € 729 € 839 € 949
Qiimaha IPhone 6 Plus ee dhamaan wadamada
wadanka iPhone 6 Plus 16 GB iPhone 6 Plus 64 GB iPhone 6 Plus 128 GB
ISTICMAALKA € 580 € 657 € 734
Kanada € 599 € 677 € 753
Dubai € 632 € 716 € 800
Taiwan € 666 € 759 € 846
Hong Kong € 683 € 718 € 807
Australia € 696 € 787 € 871
Singapore € 702 € 789 € 886
New Zealand € 724 € 818 € 913
Switzerland € 727 € 826 € 925
Ruushka € 753 € 854 € 956
UK € 778 € 879 € 992
Jarmalka € 799 € 899 € 999
Holland € 799 € 899 € 999
Isbaanish € 799 € 899 € 999
Boortaqiiska € 799 € 899 € 999
Sweden € 802 € 910 € 1019
Danmark € 806 € 913 € 1021
Norwey € 811 € 950 € 1030
Faransiiska € 819 € 919 € 1019
Talyaaniga € 839 € 949 € 1059
Dabcan, farqi weyn ayaa u dhexeeya qiimaha dalal kala duwan oo loogu talagalay aalad isku mid ah. Sida aan arki karno, gudaha Maraykanka labada moodelba way ka jaban yihiin, in kasta oo qiimahoodu aanu lahayn canshuur ay kujiraan maadaama ay kuwan ku kala duwan yihiin hadba waxay ku xiran tahay gobolka lagu soo iibsaday, in kastoo farqigu yahay 10% ama wax la mid ah.
Intaa waxaa dheer, anigatalia waa dalka ay ku yaalliin aaladaha sare ee cusub ee Apple, iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus. Isbaanishka waxaan dhihi karnaa waa qeybta dhexe ee miiska. Si kasta ha noqotee, waxay umuuqataa inay had iyo jeer ku habboon tahay inaad iibsato iPhone-ka wadamada kale inkasta oo waa inaan tixgelinno dammaanadda aaladda, maaddaama aysan ka wada jirin dalalka oo dhan.